बुटवल उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ९० करोड - Butwal Online
चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत
बुटवल, असार १० । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान समेतलाई समावेश गर्दै गत वर्ष भन्दा करिब ३५ करोड बढि रकमको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैंयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा नगर उप–प्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले आव ०७६÷०७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटको मुख्य उद्देश्य सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल ः खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ ।
बजेटको स्रोतका रुपमा स्थानीय आन्तरिक स्रोत (कर, सेवा शुल्क, दस्तुर) तर्फ जम्मा रु. ५१ करोड ९४ लाख ४० हजार, राजश्व बाँडफाँड तर्फ जम्मा रु. १६ करोड ७४ लाख १४ हजार, संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने समानिकरण, सशर्त, पूँजीगत अनुदान समेत रु. १ अर्व १ करोड ३१ लाख, प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने जम्मा रु. १० करोड ७५ लाख ९६ हजार, अन्य आय जम्मा रु. ५ करोड ७४ लाख ५० हजार, गत वर्षको अ.ल्या. जम्मा रु. ३ करोड ५० लाख समेत गरी जम्मा आम्दानी रु.एक अर्ब ९० करोड हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण, युवा खेलकूद, भाषा, साहित्य, संस्कृति, स्थानीय सेवा, मानव संशाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्र भागमा राखेर विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नगर सभामा आर्थिक विकास समितिका संयोजक टंकप्रसाद पराजुलीले आर्थिक विधेयक–२०७६ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।